Forum serasera malagasy Polifika - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Polifika
rar - 12/08/2003 19:23
Toerana anjakan'ny lainga sy ny fitaka ary ny fangolika ny politika eran-tany. Porofon'izany ny ala-bato nataon'i Bush raina ho an'ny zanana tany Florida, ny nanejehin'i Blair an'i ilay manampahaizana Kelly izay sahy nanamposaka ny laingany, ny fomba fitantanan'i Ratsiraka nandritra ny 23 taona ary ny toky fitaka sy fampiorohorona ary ny ampihi-mamba amin'ny fananam-pajakana ataon'i Masindahy Marc ankehitriny. Raha tiantsika hiova izany tsy ny fanovàna mpitondra fotsiny no ilaina fa ny fanovàna ny fitsipi-dalao sy ny sehetra ilalaovana mihitsy. Ary ny fifanankalozan-kevitry ny be sy ny maro @ internet no fomba tsara indrindra anaovana an'izany toy ny logiciel "open source". Averina dinihina daholo mihitsy ny rehetra : ny firafitry ny fanjakana, ny adidy sy andraikitra ny mpitondra, ny andripanjakana, averina daholo mihitsy e! Ohatra:
1. Atao toy ny mpiasa rehetra ny filohan'ny firenena, rehefa tsy mahavita ny asa nampanaovina azy (azo refesina hoe vita sa tsy vita ny asa) dia misolo ary tsy mahazo miverina milatsaka ho fidiana akory.
2. Ny député sy ny Sénateur tsy ilaina fa mandany vola sy fotoana fotsiny. Ny cours des comptes sy ny fitsarana izay tsy tokony hiankina @ fanjakana na kely aza no mitsara hoe mahavita azy sa tsy ny mpitondra sns.
ravalo - 12/08/2003 12:41
tsy azo iadian-kevitra izay rehetra voalza etsy ambony :anjakan'ny fangolehana ny politika eran-tany .Kanefa marihina etoana fa ny fitaka eto dia tsy voafarita tsara mety ho mitondra mankany @ fatsrana ny fitaka eto satria na dia ny manao baolina aza dia mila fitaka . ny Fitaka dia mety ho fahaiza_manao ( techniques) ka tsy hita zay maharatsy azy .Raha te ho mpitondra mahay ihany koa ianao dia mila mahay miala @ireo fitaka maro isan_karazany .Matetika ihany koa ny olona tsirairay dia manana ny firehin-keviny ka raha tsy mitovy ny fomba @mpitondra eo an-toerana dia ataony zay fomba rehetra hanaratsiana .Raha eo @firafitrin'ny fanjakana zany no jerena dia raha mahafantatra rafitra vaovao ankoatran'ny efa misy ny olona iray dia mety hahavita ny hanova izao tontolo izao ,fa za mino fa tsy misy tsara noho ny misy ankehitrihyio.Moa ny assemblée dia lamina napetraka mba hisian'ny hiérarchie eo fanjakana iray ary efa voafaritra ny andraikitrin'ny olona tsirairay ao antin'izany zay no azoko ambara aloha @zao .
rar - 13/08/2003 20:48
Marina fa samy manana ny firehany politika ny olona fa tsy izany no tiako resahina. Raha nitonona ny mpitondra rehetra aho dia mba ilazàna fotsiny fa fangolika iry trano izay tonga eo mba hitanana ny fitondrana fa tsy ho an'ny tombotsoan'ny b sy ny maro velively. Dify tanteraka @ tanjona tokony alehany izany ilay atao hoe demokrasia raha izany. Tsy hitovizako hevitra aminao kosa ny filazàna fa izao no fomba tsara indrindra @ firafitry ny fitondrana noho ireto antony manaraka ireto:
1. Ny zavatra vokatry ny saina sy ny asatanan'ny olombelona rehetra dia azo antsaraina avokoa na inona na inona ary izany no mahatonga ny fivoarana fa rahatsy izany dia mbola mitovy t@ andron'ny prhistoire isika hatramin'izao.
2. Raha tsara io firafitra io dia efa tokony nandroso i Dago hatramin'izay satria ny firafitra mahomby dia tokony hafaka hanatsara ny fiasany miaraka @ lalàna misy ao aminy sy ny fampiarana azy. Izany no mampiavaka ny firafitry ny zava-manan'aina sy misaina @ vonga-potaka. Mahay manatsara tena na hoe "système auto-améliorant".
3. Filoha efatra no nandalo teto Dago tao anatin'ny 10 taona ary korontana politika roa lehibe anjakan'ny vono olona sy ny mihetrena ara-pivelomana (récession économique).
Raha mikasika ny député eto Dago no resahina dia manasa anao aho hanatrika fivoriana ao Tsimbazaza. Ny 4x4 no mahamay ny olona mivory ao. Tsy misy 5% ny solombavambahoaka no mahay mamaky izay budget izany ary ny fifidiana lalanà ao dia saosy no miasa raha te andresy lahatra fa tsy miteny raha tsy izany. Izany ve no hoe mahomby hoy ianao? Tsy misy mandeha @ izay laoniny sy tokony ho izy ny ao noho izany. Tsy mankatoa ny fomba fiasan'ny filoha ankehitriny aho satria nandiso fanantenana aho tanteraka izy @ fadikàna tsy misy valaka ny agegen-dRatsiraka rehetra (fa resaka hafa indray moa iny) fa mihombo-kevitra tantraka aminy rehefa milaza izy fa mampiadana fiasa sy fandaniam-bola fotsiny ireo antenimiera roa ireo.
hery - 14/08/2003 10:10
Nanaitra ahy ilay endrika fitondrana vaovao... atao tahaka ny mpiasa rehetra ny mpitondra ka rehefa tsy mahavita ny asany dia esorina... dia iza no hanala azy? Hilatsaka andalambe ny vahoaka hampiseho? Raha toa mantsy ka hoe hiandry fifidianana dia toa mitovy amin'ny fitondrana misy erantany ihany. Surtout raha hoe esorina ny depute sy ny senat izay fahefana (pouvoir legislatif) mpanao lalàna afaka manaramaso ny fahefana mpanatanteraka.
Io equilibre de pouvoir io angamba no tsara hatsaraina fa ny ankoatr'izay toa tsy fitondrana.
yer - 18/08/2003 10:48
Raha dinihiko ny zavatra tian'ny namana hapetraka dia Tokony ho ny masindahy Paoly na Piera no tokony hitondra ny firenena
rar - 21/08/2003 10:33
Tsy resaka hoe Md Paoly na Piera akory fa resaka fanatsarana tsotra fotsiny. Sady ireo Md resahinao ireo anie ka mbola loza noho ny talibans ny toetrany raha mamaky tantara ianao ka izany ve no atao filamatra tsy aleo milevim-belona ? (fa tsy izany moa no resak'eto). Ndeha ho raisana ilay resaka hoe iza no hanala ny filoha raha tsy mahomby? Tsy ampy raha ny hevitro ny zavatra anontaniana ny olona milatsaka ho filoha satria kobaka ambava fotsiny ny 99.99% ny zavatra lazain'ireo. Ka noho izany dia tokony manome ny asa sy tanjona tiany hanaovana fampielezan-kevitra ny tsirairay (programme). Ireny tanjona ireny dia tokony azo isaina (quantifiable et mesurable) ary misy fandaharam-potoana ny fanantanterahina azy (calendrier de réalisation). Fahefana tsy miankina @ Rafanja no manao izany fanisana sy fanarahi-maso izany. Avy eo mandeha ny fifidianana dia izay lany lany. Isaky ny faran'ny taona dia atao ny "bilan". raha vao latsaky ny 80% (fara-faharatsiny) ny zavatra nampanantenaina no vita dia tsy misy hatak'andro fa tonga dia lasa tsy misy hatak'andro. Dia mandeha indray ny fifidianana manaraka. @ izay mihena ny kobak'ambava sy ny resa-be fa rehefa tsy mahavita azy dia "zahody". Izany no manjo ny mpiasa tsotra any anatin'ny orin'asa ka nahoana moa ny mpiasan'ny vahoaka rehetra (ny filohan'ny mpiasam-panjakana) no tsy hiaran'izany tsy maintsy isian'ny fahombiazana izany (obligation de résultat)? Ohatra iray iny fa izaho mino fa azo hatsaraina avokoa rehefa zavatra arin'olombelona. Vitan'andriananahary aza azon'ny olombelona hovaina (OGM ohatra)ka izay vitan'ny olona indray ve no tsy azo hatsaraina?
fabien - 22/08/2003 18:47
Sendra nandalo dia mba mamaly anareo e! Raha jerena @ ankapobeny dia azo atao hoe misy ihany ny fandrosoana eto dago, indrindra fa ny toe-tsain\_' ny olona tsirairay, mba efa matahotra daholo ny olona na hanao zavatra maloto na tsy mety eny an-dalana eny,ny tanana koa moa mba miha madio sy miha vita tsara fa ny fanontaniana mipetraka dia ity, ho tanteraka hatramin\_'ny farany ve ny fanamboarana sy ny fandiovana ary ny fampandrosoana, sa @ manda voalohany fotsiny.Ny polifika dia efa hitahita ihany e! soa ihany aloha nisy ilay Radio Tana94.4(KIDAONA MARAINA)manentana sy manabe mihintsy ny toetsaina hany ka tsisy mahasaky miblagy sao voateny any @ kidaona maraina,
tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny iny e!
Kofehy mpanara-panjaitra fotsiny ny panao politika gasy, tia vao e! ny gasy mihintsy e! aiza ve dia olona tsy ahoana ary efa fantatra ny eo atanana ny aretiny,dia mbola iny ihany no fidina satria TIM , mbola eo ampanaovana piramida aloha ry zalahy hatramin\_'izao fa tsy hay izay tohiny. Momba anao izay nilaza etsy ambony aho fa tokony hametraka lalana mihintsy isika momba ny fifidianana eto, oh: ny olona iray dia tsy mahazo milatsaka intsony raha vao nahavita manda in-2, fa kosa, mbola afaka manao politika na manankiana na manoro hevitra; Raha ohatra ka filoham-pokotany 2 foi izy, dia vita izay ny anjarany; Mair 2foi izy dia vita izay ny azy; Député 2 foi izy dia ampy izay. dia ohatra izay hatrany :
NB: Tsy dia mbola mety loatra aloha ny manankiana be fahatany raha tsy hoe tapitra angamba ny 4 taona nitondran-Dravalo, zay vao tokony hiteny betsaka. Ny resaka tany amidy aloha dia izao no izy.Dada Ravalo ooo! ampanofay fotsiny re fa aza amidy tanteraka e! na dia hoe 10 taona aza
dia veloma ary mahereza e!